Qor si looga saaro xayeysiiska biraawsar kasta | Laga soo bilaabo Linux
Qor si aad uga saarto xayeysiinta biraawsar kasta
Waxay dhacdaa in maanta ay jiraan kumanaan, boqolaal kun oo xayeysiis ama bogag suuqgeyn ah oo internetka ah, waxaan ka helnaa dhammaan noocyada ... Most, xayeysiinta Yahoo, baraha wax ka qabashada yar ee iibiya qoraalo la kafaala qaaday, xayeysiinta aan ka helno Facebook y Twitter (runti sidoo kale waad ku dari kartaa tweets kafaala qaaday lagu iibiyay bogagga qaarkood)… Marka la soo koobo, in internet-ka lagu wiiqay xayeysiinta iyo boorar aysan dad badani xiiseyneyn.
Waqti ka hor waxaan kala hadlay sida loo xannibo xayeysiinta internetka iyada oo loo marayo terminaalka biraawsar kasta (adigoon isticmaalin fiilooyin), waxay ka koobneyd (gacanta) ku darista boggaga xayeysiinta / iwm taas oo muujinaysa inay ahaayeen 127.0.0.1, taasi waa, markii aan furaynay bog barowsarku wuxuu aadi lahaa inuu ka raadsado sawir Adsense kumbuyuutarkayaga, maaddaama sida muuqata uusan sawirkaasi jirin, si fiican, waxba nalama tusin.
Tani waxay si cad u lahayd faa'iidooyinkeeda iyo waxyeellooyinkeeda. Marka hore, maadaama ay ahayd buug gacmeed, waxaan xakameynay meelihii la xanibay, laakiin sidoo kale, maadaama ay ahayd buug gacmeed, waxaa jiray kuwa kale oo badan oo, maadaama aanan aqoon iyaga, aanan xiri karin. Maqaalkan waxaan idiinku soo gudbinayaa qoraal aan aniga qoray oo ka shaqeynaya howsha, taas oo ah, mar kasta oo X ah oo ay soo degsato xog ururin ka kooban baraha wax basaasa iyo bogagga xayeysiinta oo ay ku darsato barahaas boggeena / iwm / martigeliyayaasheena, sidan ayaa baare ku raadiyaa ku xayaysiinta adeegaha webka kumbuyuutarkayaga ... serverka webka in, maadaama uusan jirin (iyo haddii uu jiro, ma jiraan sawirro xayeysiis / boorar) si fiican, si fudud uma arki doonno kuwa xayeysiiska dhibsanaya.
Sikastaba, waa kuwan talaabooyinka:
1. Waxaan kala soo baxnaa qoraalka oo waxaan siinaa rukhsad dil ah:
2. Kadib, aan wax ka bedelno cinwaankeena / iwm / crontab si qoraalku u socdo bil kasta, 1da bil kasta tusaale ahaan, waxay u egtahay sidan:
3. Hadda waa inay dib u bilaabaan cron daemon-kooda ama kombiyuutarka, hadba kan ugu raaxeysan iyaga.
4. Diyaar, haddii aad rabto waad sugi kartaa illaa maalinta 1 ay tahay ama naftaada ku socodso qoraalka (oo leh mudnaanta xididka).
Waxaan ku dhaafayaa qoraalka qoraalka halkan, si aan si faahfaahsan ugu sharraxo:
#! / bin / bash wget http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt -O /tmp/hosts.txt ls /etc/hosts.old &> / dev / null haddii [$? -ne 0]; markaa cp / etc / host /etc/hosts.old fi echo "127.0.0.1 localhost.localdomain localhost"> / etc / host echo ":: 1 localhost.localdomain localhost" >> / etc / host cat ama tmp / host. txt >> / etc / host rm /tmp/hosts.txt bixitaanka
Marka hore waxaan soo dejineynaa feylka oo ka kooban dhamaan liiska xayeysiisyada xayeysiinta waxaanna ku dhejinay / tmp / magaca hosts.txt. Kadib waxaan hubinaynaa in feylka /etc/hosts.old uu jiro ... haddii uusan jirin waxay ka dhigan tahay inay tahay markii ugu horreysay ee aan socodsiino qoraalkan, halkaas ayaan ku badbaadinnaa (nuqul ka samaysannaa) annaga / iwm / martigaliyayaasha /etc/hosts.old maadaama ay had iyo jeer wanaagsan tahay hayso asalka. Kadibna waxaan ku beddeleynaa dhammaan waxyaabaha ku jira / iwm / martigaliyayaasha laba xariiq oo caadi ah, oo tilmaamaya in 127.0.0.1 ay tahay localhost iyo qeybsanaan. Terminalka faylka martida loo yahay, waxaan nuqulaynaa dhammaan waxyaabaha ka kooban /tmp/hosts.txt ilaa / iwm / martigaliyayaasha (iyadoon laga takhalusin labada khadadka kale ee la dhigay), sidan ayaan horeyba u soo sheegnay in xayeysiisyada xayeysiintu ku jiraan 0.0.0.0 … Kaalay, sidaan dooneyno uun. Kadib si aan u dhammeyno, waxaan si fudud u tirtirnaa /tmp/hosts.txt waana intaas.
Qoraal aad u fudud, waxaa lagu horumarin karaa wax badan adoo hubinaya md5 ee feylka la soo dejiyey, adoo adeegsanaya amarka kala duwan si aysan u sameynin / iwm / martigeliyeyaasha xoq oo kaliya ku dar meelaha cusub, iwm. Laakiin haye, tani waa uun fikrad, nuqulkii ugu horreeyay ee shaqeynaya, ugu dambeyntii waan u sameeyay taas, si aan uga dhigo inay shaqeyso oo ay otomaatig u noqoto geedi socodka xoogaa
Waa hagaag waxba, mahadsanid wada, Eduardo iyo kuwa kale wixii ku saabsan faallooyinkooda iyo talooyinkooda maqaalkii hore. Qoraalkani wax cusub maaha (Konozidus iyo csb ayaa mar hore ii sheegay jiritaanka wax la mid ah) laakiin bueh, waxaan jecelahay inaan barnaamijyo qoraalkeyga, waan jeclahay bash ... inkasta oo mararka qaar ay jiraan xalal dhibaatadeyda ah, waxaan doorbidaa inaan mid ka mid barnaamij u sameeyo naftayda.
Sikastaba, waxaan rajeynayaa inaad kuheshay xiiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Qor si aad uga saarto xayeysiinta biraawsar kasta
Waad salaaman tahay, waad ku mahadsan tahay qoraalka, sidaas oo kale ayaan sameeyay waqti hore ka hor, waxaa jira wax ka yar 31. khadadkaooo, waan uga tegayaa iyaga si aad u nuquliso haddii aad rabto:
Ku jawaab ivanbarram
Aad u fiican, uguna fiican ayaa ah sharaxaada talaabo kasta oo aad ku baran karto
dayax gacmeed dijo
xiise leh 🙂 in kastoo runta ay tahay inta udhaxeysa Noscript, adblock plus iyo DoNotTrackme iyo qaabkeyga Iceweasel (koleyga majiro, xusuusta taariikhda….) 😉
Ku jawaab dayaxa
Haddii aan isticmaali lahaa hal biraawsar (Firefox) wax dhibaato ah ma jiri lahaayeen, laakiin waxaan isticmaalaa dhowr ... Opera, Firefox, Rekonq iyo Chromium, waxaan u baahanahay 'wax' u shaqeeya qof walba
Markii aan wax ku qoro bash / iwm / crontab oo aan galo, waxaa la ii diidaa Fasax
Ku jawaab Guso
Waa inaad ku saxeexdaa feylkaas xididka ama sudo.
Hada kadib markii aan qoro sudo / iwm / crontab waxay i weydiisataa furaheyga sirta ah, waan qoraa, waxaan dhiibaa gal waxaanan helayaa sudo: / etc / crontab: amar lama helin
Guso, miyaad isku dayday sudo nano / iwm / crontab ???
Jawaab u yerkorn
Waqtigan xaadirka ah waxaan dhigayaa waxaad tiri waxaanan helayaa macluumaad badan oo aanan garanayn waxay tahay. Waxaan u maleynayay in waxa soo muuqan karaa ay tahay waxa boostada dhahdo: 00 00 1 * * root /home/user/anti-ads.sh
Wax ka beddel faylka:
sudo nano / iwm / crontab
Kadib, dhamaadka waxaad kudareysaa xariiqa aan dhigay boostada.
Si loo dhammeeyo oo aanaan isugu murmin amarka kale, dib u bilow PC-ga iyo voila, waxay noqon doontaa waqti la sugo maalinta xigta 1st.
Sababtoo ah amarka tifaftiraha qoraalka ayaa maqan. Kiiskeyga, inaan u adeegsanayo Linux Mint deegaanka Mate, tifaftiraha qoraalka waa qalin, marka waxaad isku daydo waxay u egyihiin sidan:
qalin sudo / iwm / crontab
Mahadsanid. In kasta oo ay horeba iigu shaqaysay sudo nano / iwm / crontab.
waa crontab -e (waa wax laga beddelaa) xidid ahaan ama sudo ahaan u fiirso:
sudo su (ereyga sirta ah oo aad xidid tahay)
Ama sudo crontab -e
Tifatiraha waa vim, waxaad riixaysaa i (waa i Latin) oo ah wax la gelinayo ama wax laga beddelayo, waad dhaqaaqaysaa, waad beddelaysaa, ka dib waxaad riixaysaa Esc markaad dhamaysato oo aad riixdo: wq oo aad garaacdo gal, taasi waa diiwaan iyo bixitaan waana intaas.
Aad u fiican, aad u fiican. In kasta oo sida ay halkaas ka sheegaan aan si fudud u haysto ballaadhin iyo qaabayn aniga iga fog xayeysiinta ku jirta Firefox-kayga.
Ku jawaab Nsz
Qoraal weyn. Waa inaan sameeyaa xoogaa isbeddelo ah oo aakhirkii sidan ku sii ahaaday:
Maxaan kale dhihi karaa, way fiicantahay in la isticmaalo Linux.
Ma garanayo sababta, laakiin markii aan tafatiray marti-geliyeyaasha arrintaas, ma aanan arki karin faallooyinka youtube-ka, waan isku dayi doonaa markan waana arki doonaa.
Ku jawaab benctrox
Si daacadnimo ah, waxaan qirayaa in xayeysiintu ay tahay mid aad u culus, laakiin maqnaanshaha deeqaha, buugaag badan (oo ay ku jiraan kuwaygu) ayaa ah isha kaliya ee ay dakhli ka helaan.
Ma dhaawaceysid shirkadaha waaweyn, laakiin qorayaasha yaryar, haa ...
linuxero oo khibrad badan u leh tani waxay la mid noqon laheyd u aqrinta muusikada muusikada muusikada
Qabow oo fudud. Maxaad kale oo aad rabto?
Dhibaatadu waxay tahay inaanan sii aamini karin Adblock Plus inta ugu badan ee ay ku dalacdo furitaanka xayeysiin badan. Marka waxaan ku qancinayaa sifiican oo dhameystiran / iwm / martigeliye horeyba waan u daboolnay.
Maanta waxaan dhamaanteen raadineynaa qaabab aan ku kasban karno lacag fudud, iyadoo la tixgelinayo baahida loo qabo iyo dhibaatooyinka shaqo ee dalkeenna ka jira. Aniga, sida dhamaantiinba, sidoo kale waxaan la socda dhibaatadan oo waxaan sii wadaa safarka baaxada weyn ee Internetka, anigoo raadinaya shaqadaas oo runtii qancinaysa filashadayda, taas oo ah, in yar oo aan shaqeeyo iyo lacag badan aan kasbado. Runtu waxay tahay inaan ku jiray raadintaas muddo dheer taas oo ii keeni karta farxad buuxda (ugu yaraan dhaqaale ahaan), wax intaas ka dheer ma jiraan, waxaan u maleynayaa sidaas inaan ku sii wadi karo dhowr sano oo dheeri ah ama laga yaabo in aan la cayimin. Waxaan in muddo ah baaraya nidaamyada Multilevel, taasi waa, nidaam aad shirkad uga mid noqotid oo aad u qabato shaqooyin gaar ah oo lacag lagaa siiyo, mararka qaarkoodna mushahar aad u sareeya la siiyo. Si aad u gasho, waxaad u baahan tahay oo keliya xubin ka mid ah kuwa horeyba uga mid ahaa shirkaddaas inay ku kafaala qaadaan oo waxaad ka mid noqotaa kooxdooda. Markaad ka mid noqoto adduunkan Nidaamka Multilevel, waxaad u degsan kartaa fulinta shaqooyinka laguu igmaday maalin kasta ama qabashada waxa loogu yeedho shabakad, taas oo ah, raadinta xubno kale oo qayb ka noqda kooxdaada oo markaa samee nidaam shabakad la yiraahdo laba-labar ama qumman, taas oo abuureysa dheefaha hadhay oo lagu daro dheefaha ay kaa siinayaan shaqadaada maalinlaha ah.
Ilaa maanta, YouTube waxay haysaa macluumaad badan oo ku saabsan mowduuca. Fiidiyowyadan waxay kugula socodsiinayaan dhammaan tillaabooyinka labadaba si aad ugu qorto shirkadaha kala duwan ee adeegsada Nidaamka Multilevel iyo sida ay u shaqeyso. Waxaan baarayaa mid ka mid ah LibertaGia, waa shirkad cusub oo la abuuray iyadoo la raacayo xogta aan awooday inaan ka helo shabakada, taariikhdeeda abuuristeeda laga bilaabo Oktoobar 2013. Waxaan isdiiwaangaliyay seddex maalmood hadana waqtigaan la joogo wali malahan karo wax mala awaal ah ixtiraam. Shaqada maalinlaha ah ee aan qabto ayaa ah inaan furo 10 bog oo aan fiiriyo iyaga daqiiqad kasta midkood (ma xuma eh…), markii aan eegay waxaan siiyaa iyaga sidii la ansaxiyay oo miiska lacagta ayaa ii sheegaysa inaan kasbaday $ 3. Marka hadda waxaan kasbaday sagaal (9) $, ficil ahaan waxba kama qaban. Sida ay ku leeyihiin bandhigooda waa inaan aruuriyaa 300 $ si aan u awoodo inaan bilaabo sameynta lacagtaas lacag ahaan oo aan awood u yeesho, waan arki doonaa haddii ay sidaas tahay. Waqtigaan la joogo ma haysto wax aan ka doorto oo aan ka ahayn inaan sii wado isku dayga ah inaan gaaro tiradaas oo aan sugo inaan iibsado xirmada Booster (xirmada habka loo baahan yahay si loo iibsado taas oo leh qiime dhan $ 399).
Haddii qof doonayo inuu kaqeybqaato Nidaamkan Multilevel, waxay isticmaali karaan xiriiriyahayga si ay qayb uga noqdaan LibertaGia oo ay iskood u arkaan haddii qaabkan nololeed iyo kasbashada lacagtu ay tahay riyo ama xaqiiqo. Weli garan maayo, laakiin tallaabo tallaabo ayaan uga faalloon doonaa waxa igu dhacaya.
Waxaan u maleynayaa inaad haysatid Blog qaldan, kani ma ahan goob laga raadsado gudbin.
Daacadii, waxaad sheegayso waa been abuur. Had iyo jeer waa inaad xusuusataa: qofna siin maayo pesetas ...
Qiyaas $ 3.00 daqiiqadii, taasi waa $ 180.00 saacadiiba, miyaanay taasi u muuqan wax lala yaabo?
Saaxiib, waxaan aaminsanahay in waxa aad ku qortay Blog-kan ay ahayd jahli iyo sida ay noloshu u adag tahay, qofka kaliya ee lacag ka heli kara shirkaddaas waa milkiilaha iyo qaar ka mid ah saaxiibbada dhow, dhammaan nidaamyadaas haramku waa been abuur.
Waxaa jira shirkado qaar Lionbridge iyo Leapforge, oo u shaqeeya Google oo kuu kireysta qiimeynta bogagga, waxay kaa siinayaan $ 12.00 ilaa $ 15.00 saacadiiba, kuwani waa shirkado halis ah, waa inaad u dirtaa CV-gaaga, wey ku qiimeeyaan haddii aad dalbatona way ku shaqaaleysiinayaan.
Halkaan waxay ku sheegeen Google Adsense, oo qaarkeen naga mid ah ay u adeegsadaan Blogs-keena si ay u helaan xoogaa dinaar ah laakiin baloogyadan quruxda badan waxay ku dhowdahay inay u dhinto $ 0.00 hahahaha.
Laakiin sidaas oo ay tahay, lacag ka sameysashada internetka waa suurtagal, xitaa ku noolaanshaheeda, waxaan kuu sheegayaa khibradeyda, meeshan maahan meeshii looga wada hadli lahaa, laakiin sii eeg, wax walbana waxay ku jiraan aragtida.
Wanaagga ugu Fiican,
Waxay umuuqataa in xayeysiin la sifeeyay oo aan hor istaagi karin qoraalka d iwm / martigaliyayaasha…. 😀
Ku jawaab gabux
aad ayuu ufiican yahay, qaliinka waa lamidyahay adfree ee android, markaan rakibay waxaan moodayay: sidee xariif uah kan abuuray haha ​​laakiin waligey igama dhicin in aan ku isticmaalo Gnu / Linux.
Mahadsanid. Waxaan filayaa inay dhamaatay.
Waad salaaman tihiin, inyar ka hor waxaan raacay talaabooyinkii aad ku qeexeen qoraalkaagii hore sifiican ayayna aniga ila shaqeeyeen, dhibaatadu waxay ahayd inaan isticmaalo bog aan ku tuso waxyaabo gaar ah oo aan ku waydiiyo inaad xirato xayeysiinta, maadaama aysan i tusi karinna waxay muujisay qalad ku saabsan tan . Ma jirtaa waddo si ku-meel-gaar ah looga joojiyo xannibaadda ama looga hortago in laga xannibo bogagga qaarkood?
salaan iyo mahadsanid wadaagida macluumaadkan 😀
Taas waxaad uga faaloonaysaa, waxaan ka fikiri karaa dhowr xal, inkasta oo aanan garanayn midka sida ugu fiican ugu habboon dhibaatadaada. Codsi kasta oo websaydh ah waa adduun. Dhammaan waxay kuxirantahay dhacdada gaarka ah, waxaad diyaar u tahay inaad ku bixiso kheyraadka nidaamka iyo waqtiga iyo dadaalka aad rabto inaad ku maal gasho dhibaatadan.
Xalka ugu horeeya ee aan ka fikiri karo, laga yaabee midka ugu fudud sidoo kale, wuxuu noqon lahaa in meesha laga saaro cinwaanka xayeysiinta ee isku dhaca faylka / iwm / martida loo yahay. Waxaa laga yaabaa in ka badan xalka tani waxay noqon kartaa in la ciribtiro dhibaatada asalka ah, si kastaba ha noqotee iyo dabcan ma joojin doontid xayeysiinta.
Waxaad sidoo kale sameyn kartaa qoraal ka saaraya / ku daraya bogga xayeysiinta / iwm / martida. Marka markaad ubaahantahay xayeysiinta si aad uhesho waa inaad fulisaa. Waad ka dhigi kartaa wakhti ama badal beddelaya dhowr gobol. Fulinta qoraalka waxay noqon kartaa mid gacmeed, laakiin sidoo kale waa otomatig lagu sameyn karaa si ay u socoto marka goob ama URL gaar ah la helo, tan dambe, dalab wakiil ayaa la isticmaali karaa. Xaaladdan oo kale kama hor istaagi doonno xayeysiinta gebi ahaanba.
Xalka kale wuxuu noqon karaa in laga furo daaqada qalabka horumarinta webka biraawsarka. Codsi u dir URL-ka meesha kheyraadka aan dooneyno inaan ku aragno ku yaal. Ka dibna baari jawaabta la helay si loo tijaabiyo, iyada oo loo marayo wax ka beddelka DOM iyo fulinta JS code, in codsigu soo bandhigo habdhaqanka iyo waxyaabaha aan dooneyno. Tan awgeed waa inaan baranaa sida barnaamijka webka uga shaqeeyo biraawsarkayaga. Tani ma noqon doonto hawl fudud, maadaama ay u badan tahay in koodhka arjiga la been abuuray. Xalkani wuxuu ku saleysan yahay wax ka beddelka habdhaqanka shabakadda ee adeegsanaya nidaamka xayeysiinta (ee la xiriira dhinaca macaamilka). Xalkan, waxaan ku xakameyn doonnaa xayeysiinta oo aan marin u heli doonnaa ilaha, laakiin si qaas ah ayaan gacanta u marinaynaa. Haddii aad rabto inaad otomaatig ka dhigto hawsha, waxaan u qaabeyn karnaa wakiil wakiil oo mas'uul ka ah wax ka beddelka jawaabta HTTP-da (tusaale ahaan privoxy).
Xalka suurtagalka ah ee mudan in laga fiirsado haddii aad leedahay server HTTP ah oo socda oo aadan rabin inaad rakibto wakiil, waa in la hirgeliyo beddelaadda dhinaca macaamilka ee nidaamka xayeysiinta. Waxaan u arkaa xalkaan mid xoogaa fog oo fog, laakiin xaaladaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay ansax tahay. Marka hore waxaan tafatirnaa / iwm / martigaliyayaal si markaa xayeysiinta xayeysiintu u tilmaamayso ip-gaaga deegaankaaga Ka dib waxaan u qaabeynaa adeegaha HTTP si ay ugu gudbiso dhammaan codsiyada ku saabsan boggaas isla content. Mawduucani waa inuu hirgeliyaa caqli-gal fudud oo nidaamka xayeysiinta ah, marka laga eego aragtida hannaanka u oggolaanaya aragtida saxda ah. Sidii xalkii hore, waa inaad fulisaa daraasad ku saabsan shabakadda, nidaamka xayeysiinta iyo isdhexgalka ka dhexeeya. Waa suurtagal in labada nidaamba ay ku xiriiraan dhinaca macaamilka iyagoo adeegsanaya farsamooyin iskutallaab ah oo aan u baahan doonno nooca maxalliga ah.
Sidaad u aragto, kakanaanta iyo habka loo adeegsado labada xal ee ugu dambeeya waxay kuxirantahay si aad u baaxad weyn nidaamyada gaarka ah ee ku lug leh. Sidaan horay u sheegay, codsi kasta oo web-ku waa duni. Waa muhiim in la barto lana falanqeeyo nidaamyada iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka sida raadadka fulinta, injineernimada rogista ...
Labadii xal ee ugu dambeysay ee halkan lagu soo bandhigay waxay raacaan fikradda ah in isdhexgalka ka dhexeeya arjiga shabakadda iyo nidaamka xayeysiinta lagu sameeyo macaamilka. Haddii howshu ku saleysan tahay nooc ka mid ah isdhexgalka ka dhexeeya server-yada, waa in la qaadaa qaab ka duwan sidii hore.
Tani waxay i xasuusineysaa kiis gaar ah oo igu dhaca kumbuyuutar aan ka isticmaalo dhexdhexaadiye (oo leh ilo aad u yar). Markii aan galo degel gaar ah, waxay qabataa wax la mid ah seenyada aad soo jeedisay: maadaama aan xayiray bogga xayeysiinta, waxaan hayaa sanduuq cad oo dul saaran waxyaabaha aan doonayo inaan daawado, tanna lagama saari karo howlgalka laga fuliyay webka markaa waa lagama maarmaan in xayeysiinta la raro. Maaddaama mashiinku leeyahay agab aad u kooban si howlo badan u socon karaan, anigu ma galo shabakadda su'aasha si joogto ah runtiina ma doonayo inaan nafsadeyda isku adkeeyo, waxaan doortay ikhtiyaarka ah in wax laga beddelo DOM-ka markii aan doonayo inaan arko.
Waa hubaal inay jiraan xalal badan, xitaa waa macquul in midkood sifiican loo waafajiyo ama loo fududeeyo, laakiin waxaan rajaynayaa inay tani kaa caawin doonto.
Ku jawaab powergame
Waxaan sidoo kale la kulmay goobo ay ka muuqdaan sanduuq madhan waxyaabaha ku jira ama meelaha banaan (oo ah halka ay xayeysiintu caadi ahaan u socoto) laakiin markaan arko inay lama huraan tahay inaan qariyo waxaan isticmaalaa Caawiyaha Wax Qarsoon loogu talagalay Firefox (Ma garanayo haddii ay jiraan wax sidan oo kale ku jira daalacayaasha kale, haddii kale waa lagama maarmaan in wax laga weydiiyo CSS 3 xulista oo shaandhada gacanta ku samee).
Cristian, haddii aad ula jeeddo marka aad furto bog cayiman wax sida "Deactivate Adblock si aad u aragto degelkan" ama wax la mid ah, markaa waad isticmaali kartaa Dilaaga anti-Adblocker (waxay u baahan tahay Dufan daayeer si aad u shaqeyso) taas oo meesha ka saareysa waxyaabo badan oo ilaalin ah oo ay adeegsadaan boggaga qaarkood kuwaas oo kugu qasbaya inaad joojiso xayeysiiska xayeysiinta (Weli wax fikrad ah kama qabin in noocan ah ilaalinta ay shaqeyn doonto xitaa iyadoo la xirayo domainka faylka martida loo yahay).
Faylka, in muddo ah ayaan isticmaalayay.
Laakiin waxa ugu xiisaha badan waa sharaxaadda sida qoraalka oo dhan u shaqeeyo works
Tabobar loogu talagalay bogagga saafiga ah wuxuu noqon lahaa mid xiiso leh hahaha
Waxaan ku arkay qoraallo halkan ku wareegsan mawduuca, laakiin halkan, tusaalahan, sidoo kale wax baan ku dhammaystirayaa.
Waxaan fiidmeer u sameyn doonaa daaqadaha: fsjal
hooo aad u wanaagsan, runta waa la qadarinayaa
Ansixiyay !!!!: O)
Ku jawaab anderson freitas
Wanaagsan, waad ku mahadsan tahay tabarucyadan wanaagsan ee wanaagsan ...
qoraalka kuma siinayo dhibaatooyin ufw?
Waan ka xumahay dhiiranaanta, laakiin waxaan ku dhajin lahaa qoraalka sidan (taasi waa, isbeddeladan):
haddii [$? -ne 0]; markaa
cp / iwm / martigaliyayaasha /etc/hosts.old
echo "127.0.0.1 localhost.localdomain localhost"> / iwm / martigaliyayaal
echo ":: 1 XNUMX localhost.localdomain localhost" >> / iwm / martigaliyayaasha
bisad /etc/hosts.old >> / tmp / host-blacklist
bisad /tmp/hosts-blacklist.txt|uniq >> / etc / host
Qaarkeen waxay leeyihiin goobo cayiman oo martigaliyayaasha ah oo leh qoraalka lumaya, i sax haddii aan khaldanahay, waan hurdaa huh
Maya, aad iyo aad baad ugu mahadsantahay waxtarkaaga 🙂
Waad salaaman tahay KZKG ^ Gaara!
Waxaan u adeegsadaa manjaro leh kde iyo firefox.
Runta ayaa ah qoraalka aniga faa iido badan ayuu ii leeyahay.
Waan fahmay sida qoraalka u shaqeeyo (tilmaam kasta oo ku jira), laakiin waxa aan aniga ii caddayn waa ...
1) maadaama ay lamid tahay, tusaale ahaan, markay furanayso fiidyow youtube-ka ah oo aan xayeysiinta culeys saarin
2) imisa jeer ayaa la cusbooneysiiyaa keydka macluumaadka, ma waa cusbooneysi maalinle ah? Hadday sidaas tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan cusbooneysiiyo keydka xogta maalin walba oo aan bil kasta ahayn.
3) dhibic 3 .. Hada waa inay dib u bilaabaan cemon-daemon, sida dib-u-bilaabida u yidhi daemon, maxay noqon doontaa tilmaamaha loo isticmaalo
4) Haddii aan dib u bilaabo buugga xusuus-qorka, waa inaan mar kale fuliyaa qoraalka ama fulintiisa ay tahay oo keliya cusbooneysiinta keydka xogta, taas oo ah, markii ugu horreysay ee aan diro qoraalka, xannibaadda bogagga weligeed way sii jirtaa.
waan ka xumahay su'aalo badan laakiin maqaalladaada oo dhami waa kuwo aad u fiican waxaanan maalin walba ku baranayaa boggaaga.
mahadsanid. dhunkasho romi
Ku jawaab rominash
1) Markaad furto fiidiyaha YouTube-ka, koodhka bogga (HTML) ayaa ah nambarka lagu muujinayo fiidiyaha, css, iwm. Waxa kale oo jira meel (div) ah oo lagu dhejinayo xayeysiinta Adsense (Google), laakiin xayeysiiskaasi kuma jiro domainka youtube.com, wuxuu ku jiraa (tusaale ahaan) ads.adsense.com ama wax la mid ah. Bogaggaas (ads.adsense.com) waa 100% xayeysiin, markaa waxba kama buuxin doontid. Marka, macno malahan inaad aadeyso 30 bog, illaa iyo inta ay ka qaadayaan xayeysiinta boggaas, adiga kuuma soo muuqan doono.
2) Si daacadnimo ah uma haysto fikrad, waxaan galiyay crontab si aan u cusbooneysiiyo qoraalka DB bishiiba mar, laakiin ma ogi haddii cusbooneysiinta hosts.txt ay aad u badan tahay iyo in kale.
3) Haa, waxaan idhi dib u bilaabida kumbuyuutarka (oo dib u bilaabaya dhamaan adeegyada sidoo kale si cad) si aanan u sii murgin. Sidoo kale, adeega sudo cron waa inuu kuu shaqeeyaa hadaad isticmaasho Debian, Ubuntu ama Mint. Haddii aad isticmaasho wax kale oo nidaam leh (Arch, Chakra, ma hubo haddii Manjaro sidoo kale) markaa waxay noqon doontaa sudo systemctl restart cronie
4) Markaad tafatirto / iwm / crontab waa inaad u sheegtaa kumbuyuutarka inuu faylkani isbeddelay, inaad adigu wax ka beddeshay iyo inay tahay inuu mar kale akhriyo si loo tixgeliyo isbeddelka. Isaga si uu dib ugu akhriyo feylka, waxaad dib u bilaabi doontaa qolka ama waxaad dib u bilaabi doontaa PC-ga. Hadda, markaad dib u bilowdo kombuyuutarka, qoraalka si toos ah uma socon doono, wuxuu soconayaa maalinta aad u sheegto / iwm / crontab. Iyo haa, markii ugu horeysay ee aad maamusho qoraalka haddii wax waliba si fiican u shaqeeyaan (waxaad ka hubin kartaa: bisad / iwm / martigaliyeyaal) waxaad horeyba u lahaan doontaa xayeysiinta.
Ha ka welwelin su'aalaha, waan ku faraxsanahay inaan caawiyo.
mahadsanid kzkg !!
cad aan macquul aheyn !!
Marcelo (N3krodamus) dijo
Qoraalku waa fiican yahay, laakiin wuxuu leeyahay nooc qoraal ah. Halkii o (kiis hoose) waa inuu noqdaa O (warqad ama kiis sare) maxaa yeelay haddii kale waxa keydinaya ayaa ah iskuxirka isku xirka faylka /tmp/hosts.txt
Jawaab Marcelo (N3krodamus)
Waad ku mahadsantahay cadeynta, horeyba waan u hagaajiyay.
Laba faallooyin qabow:
- Waa maxay hab layaableh oo lagu xaqiijiyo in faylkaasi jiro, ninyahow… Miyaad isku dayday inaad isticmaasho haddii [-f $ file] halkii aad ka dooran lahayd ls oo u soo dirta wax soo saarka / dev / null ka dibna waxaad xaqiijin doontaa inay khalad tahay Heerka oo aad dhowr jeer sameyso sooooo?
- Dhinaca kale ... iska ilaali -o (yar) ee wget-ka ... Taasi MA SAMEEYSID waxaad rabto inaad sameyso. Isku day -O (xarfaha waaweyn)
Hal talo: tijaabi qoraallada kahor daabacaadda
Waxaad ku qori kartaa qoraalka oo dhameystiran sixitaankaaga si aan u tijaabino.
Waxaad ku ridi kartaa qoraalka oo dhameystiran sixitaankaaga si aan u tijaabino.
Sax, sidoo kale waan ku hubin karay imtixaanka ... Waan ilaaway waxyaabahan markii aan sameeyay qoraalka ^ - ^
Maxaad u saxeysaa faylka / iwm / martida loo yahay? Miyayna ahayn in 'DROP' la adeegsado iptable-yada ay faa'iido badan yeeshaan oo fiicnaadaan?
Ku jawaab Zero
Waxay noqon kartaa, laakiin waxay noqon kartaa arrin khatar ah. Qoraalkani wuxuu xamuul ka yahay xeerarka bogga saddexaad, sida adblock laakiin aad ayuu uga awood badan yahay. Haddii aan u oggolaanno qeybta saddexaad in ay abuurto oo nuqul ka sameyso xeerarka iptables ee nidaamkayaga, waad qiyaasi kartaa halista nabadgelyo ee ay abuuri karto. Ka sokow, qaarkood waxay isticmaalaan gufw, firestarter, iwm, waxay isticmaali karaan qaab u gaar ah oo tirtiri kara kuweenna.
KZKG ^ Gaara: Waad ku mahadsantahay macluumaadka, waligey kama welwelin dhinacan, laakiin way ila habboon tahay.
pablo @ fausto ~ / Software / Scripts% wget http://ftp.desdelinux.net/anti-ads.sh
Xalinta http://ftp.desdelinux.net (ftp.fromlinux.net)… guuldareystay: Magac ama adeeg aan la aqoon.
wget: cinwaanka martida loo yahay "ftp.fromlinux.net" waa la xalin kari waayey
dhibaatooyinka dns, waa inaad haysataa wax soo saarkan: wget http://ftp.desdelinux.net/anti-ads.sh –13: 34: 11– http://ftp.desdelinux.net/anti-ads.sh => `` anti -ads.sh ''
Xalinta http://ftp.desdelinux.net... 69.61.93.35
Ku xiraya http://ftp.desdelinux.net[69.61.93.35]:80... ku xidhan
Codsiga HTTP ayaa loo diray, sugitaanka jawaabta ... 200 OK
Ka dib markaan akhriyay gelitaanka barta waxaan xiiseeyay mawduuca waxaanan helay codsi ujeedadan oo dhammaystiran oo u oggolaanaysa ku darista liisas dhowr ah isla mar ahaantaana GUI oo loogu talagalay kuwa jecel raaxeysigan ...
Ku jawaab totapunk
Qof ma qori karaa asalka asalka ah ee faylka /etc/host.old
Khalad ahaan waan tirtiray.
Ku jawaab bxxx
Waad salaaman tahay!
Waad naxariis badnaan laheyd inaad ii sharaxdo sida looga takhaluso tan ka muuqata qunsulka, markasta oo aan furo, waxaan haystaa Arch.Linux 32 bits with Kde:
cadee -x MIDAB = = gnome-terminal
ku dhawaaq -x DESKTOP_SESSION = »KDE Plasma Workspace»
sheeg -x BILAASH =>: 0 ″
cadee -x GPG_AGENT_INFO = »/ guriga / javier / .gnupg / S.gpg-wakiil: 18358: 1 ″
cadee -x GS_LIB = »/ guriga / javier / .fonts»
ku dhawaaq -x GTK_MODULES = »canberra-gtk-module»
ku dhawaaq -x GTK_RC_FILES = »/ etc / gtk / gtkrc: /home/javier/.gtkrc: /home/javier/.kde4/share/config/gtkrc»
cadee -x GURIGA = »/ guriga / javier»
sheeg -x KDE_FULL_SESSION = »run»
sheeg -x KDE_MULTIHEAD = »been ah
sheeg -x KDE_SESSION_UID = »1000 ″
sheeg -x KDE_SESSION_VERSION = »4 ″
sheeg -x LANG = »en_AR.UTF-8 ″
ku dhawaaq -x LOGNAME = »javier»
caddee -x MAIL = »/ var / spool / mail / javier»
cadee -x MOZ_PLUGIN_PATH = »/ usr / lib / mozilla / plugins»
ku dhawaaq -x OLDPWD
ku dhawaaq -x PATH = »/ usr / local / sbin: / usr / local / bin: / usr / bin: / usr / bin / site_perl: / usr / bin / vendor_perl: / usr / bin / core_perl»
sheeg -x PWD = »/ guriga / javier»
ku dhawaaq -x QT_PLUGIN_PATH = »/ guriga / javier / .kde4 / lib / kde4 / plugins /: / usr / lib / kde4 / plugins /»
ku dhawaaq -x SESSION_MANAGER = »maxaliga / ugu fiican: @ / tmp / .ICE-unix / 18390, unix / thebest: /tmp/.ICE-unix/18390 ″
ku dhawaaq -x SHELL = »/ bin / bash»
sheeg -x SHLVL = »2 ″
ku dhawaaq -x SSH_ASKPASS = »/ usr / lib / seahorse / seahorse-ssh-askpass»
sheeg -x TERM = »xterm»
cadee -x USER = »javier»
sheeg -x VTE_VERSION = »3603 ″
sheeg -x WINDOWID = »85983238 ″
cadee -x XAUTHORITY = »/ guriga / javier / .Xauthority»
sheeg -x XCURSOR_SIZE = »0 ″
ku dhawaaq -x XCURSOR_THEME = »KDE_Classic»
sheeg -x XDG_CURRENT_DESKTOP = »KDE»
ku dhawaaq -x XDG_DATA_DIRS = »/ usr / share: / usr / share: / usr / local / share»
sheeg -x XDG_RUNTIME_DIR = »/ orod / isticmaale / 1000 ″
sheeg -x XDG_SEAT = »kursiga0 ″
sheeg -x XDG_SESSION_ID = »c2
sheeg -x XDG_VTNR = »1 ″
Ma aqaan wax kale oo aan sameeyo waana wax aad looga xumaado ...
Aad baan u qadarin lahaa!
Waxaan ka codsanayaa khibradaada!
Aad baad u mahadsantahay iyo salaan .-
Jawaab si loo xukumo
felix cabrera dijo
Sideen uga saaraa xayeysiiska goobta »Haha»
Ka hor, mid ayaa tirtiri lahaa lambarka iyo voila
hada waxba ma dhacaan
Ku jawaab felix cabrera
Waad salaaman tahay, waxaan ahay qof adeegsada debian badan, waxaan isku dayay qoraalka oo wuxuu shaqeeyaa in ka badan sida aan jeclaan lahaa, aan kuu sharaxo, markii aan tijaabinayo, ma arki karo sida ay yihiin websaydhada, degelka wargeysyada waxaan kaliya ku arkaa cinwaanka jeldiga, maya faallooyinka wararka, iyo boggan isla isla wax baa igu dhacaya, ma arki karo wax aan ka ahayn waxa sanduuqyada ku dhaca, mana arki karo maqaalka ama faallooyinka, waxaas oo dhan waxaa ka socda Firefox oo ah biraawsarka aan adeegsado, sidee baan uga bixi karaa isbedelada qoraalkan? Horey ayaan uga saaray qafiska, laakiin "saamaynta" wali wayjirtaa, aad baad u mahadsantahay.
La Heli Karo Jabiyaha Asalka ah # 4
Adeegga Tusaha leh OpenLDAP : Shahaadooyinka Debian 7 “Wheezy”